Date: 10 juillet 2016 - 14:15
Raha misy milaza hoe:
‘Mpamono olona ianareo! Avelanareo ho faty fotsiny ny zanakareo, noho ianareo tsy manaiky fampidiran-dra’
Azonao valiana hoe: ‘Avelanay hotsaboina ny zanakay, kanefa mifidy fitsaboana azo antoka kokoa izahay, mba tsy hahatonga azy ho voan’ny SIDA, aretin’aty, na tazomoka. Ny fitsaboana tsara indrindra no irinay ho an’ny zanakay, toy izay irin’ny ray aman-dreny rehetra tia zanaka.’ Azonao ampiana hoe: 1) ‘Rehefa be dia be ny ra very, dia mila haverina amin’ny laoniny haingana ny habetsahan’ny ranon-dra. Hainao tsara angamba, tompoko, fa rano ny tena betsaka ao amin’ny ra. Ao koa ny liomena, liofotsy, sy ny sisa. Rehefa betsaka àry ny ra very, dia ny vatana mihitsy no mamokatra liomena sy liofotsy haingana kokoa. Tena ilaina hampitomboina koa anefa ny ranon-dra. Misy ranoka na fanafody tsy misy ra azo ampiasaina amin’izany, ary ekenay ny hampiasana azy ireny.’ 2) ‘Olona an’arivony no efa nampiasa azy ireny, ary tena nisy vokany tsara izany.’ 3) ‘Mbola zava-dehibe kokoa aminay anefa ny voalazan’ny Asan’ny Apostoly 15:28, 29.’
Na hoe: ‘Azoko ny mahatonga anao hilaza izany. Manan-janaka koa angamba ianao e! Irintsika ray aman-dreny mantsy ny hahasalama ny zanatsika. Tsy maintsy misy antony tena lehibe àry, matoa isika tsy manaiky ny hampiasana fitsaboana sasany amin’ny zanatsika.’ Azonao ampiana hoe: 1) ‘Mety hisy vokany eo amin’ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreny sasany ve ity voalazan’ny Asan’ny Apostoly 15:28, 29 ity?’ 2) ‘Mila manontany tena àry isika hoe: Ampy finoana ve aho mba hanarahana ny didin’Andriamanitra?’
‘Tsy mino ianareo hoe mamonjy aina ny fampidiran-dra’
Azonao valiana hoe: ‘Angamba ianao nahare olona na namaky tantara milaza fa mety ho faty ny Vavolombelon’i Jehovah tsy nanaiky fampidiran-dra. Inona anefa no mahatonga anay tsy manaiky hampidiran-dra?’ Azonao ampiana hoe: 1) ‘Vonona ho faty ho an’ny vadinao ve, ohatra, ianao satria tia azy?... Misy koa olona vonona ho faty ho an’ny tanindrazany, ary lazaina fa mahery fo izy ireny. Mbola lehibe lavitra noho ny olona na zavatra et&#7923; an-tany anefa Andriamanitra. Vonona hamoy ny ainao ho azy ve ianao satria tia azy sy tsy te hivadika aminy?’ 2) ‘Ny Teniny mihitsy mantsy no milaza amintsika mba hifady ny ra. (Asa. 15:28, 29)’
Na hoe: ‘Be dia be ny zavatra fanaon’ny olona, nefa tsy ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Anisan’izany, ohatra, ny lainga, ny fanitsakitsaham-bady, ny halatra, ny fifohana sigara, ary ny fampidiran-dra, araka ny voalazanao teo. Nahoana? Satria manaiky ny Tenin’Andriamanitra izahay.’ Azonao ampiana hoe: 1) ‘Fantatrao ve fa ny Baiboly no milaza hoe tokony ‘hifady ny ra’ isika? Ity ilay andininy milaza izany. (Asa. 15:28, 29)’ 2) ‘Tadidinao angamba fa nilaza tamin’i Adama sy Eva Andriamanitra hoe azon’izy ireo hanina ny voan’ny hazo rehetra tao Edena, afa-tsy ny voan’ny hazo iray ihany. Nihinana an’ilay voankazo voarara anefa izy mivady fa tsy nankatò, ka nafoiny ny zava-drehetra. Hadalana izany! Tsy misy voankazo voarara intsony ankehitriny, kanefa mbola misy zavatra noraran’Andriamanitra taorian’ny Safodrano, tamin’ny andron’i Noa. Tsy inona izany fa ny ra. (Gen. 9:3, 4)’ 3) ‘Manam-pinoana an’Andriamanitra àry ve isika? Raha mankatò azy isika, dia afaka ny ho lasa lavorary sy hiaina mandrakizay rehefa tonga ny Fanjakany. Na maty aza isika, dia manome toky antsika izy fa hanangana antsika.’
‘Ahoana raha milaza ny dokotera hoe: “Ho faty ianao raha tsy ampidiran-dra”?’
Azonao valiana hoe: ‘Raha efa atahorana ho faty ny marary iray, dia azon’ilay dokotera antoka tokoa ve fa tsy ho faty ilay olona, raha ampidiran-dra?’ Azonao ampiana hoe: ‘Afaka mamelona an’izay efa maty anefa Andriamanitra. Tsy hitanao hoe hadalana ve ny handikana ny lalàny, raha efa fantatrao fa ho faty ianao? Tena mino an’Andriamanitra aho. Ary ianao? Mampanantena izy fa hatsangany ireo mino ny Zanany. Matoky izany ve ianao? (Jaona 11:25)’
Na hoe: ‘Mety hilaza izany izy satria tsy hainy ny mitsabo tsy mampiasa ra. Ataonay àry izay ifandraisany amin’ny dokotera manana traikefa amin’ny fitsaboana tsy ampiasana ra, na mitady dokotera hafa izahay.’
Date: 11 juillet 2016 - 11:10
Araka ny fantatra dia tonga hatramin'ny 450 ka hatramin'ny 1150 ny isan'ny temoins maty isan-taona honon'ny lalàna mikasika ny rà.
=> Azo itokisana ve io fampianarana io? Tsy diso ve ry zareo?
=> Nahoana ny Jiosy no manaiky ny fampidiran-drà nefa ry zareo no tena tompon'ny fanarahan-dalàna?
Date: 11 juillet 2016 - 11:39
Na siantifika na dokotera dia tsy misy manambara hoe ny fihinana rà dia mitovy amin'ny fampidiran-drà
Aiza ho aiza ao anaty baiboly ny porofo fa azo atao ny mampiditra singa avy amin'ny rà sasan-tsasany fa tsy ny rà manontolo?
Tsy mitovy amin'ny vakisiny sy greffe d'organe ihany ve izao ataon'ny watchtower zao?
Tsy azo atao taloha ny manao vakisiny sy ny transplatation d'organe, nefa amin'zao lasa azo atao indray?
Miovaova foana ny fampianaran'ny témoin, moa ve azo itokisana izany?
Sao dia hevitr'olombelona fa tsy hevitr'Andriamanitra?
==> Efa imbetsaka ny temoin no nanao faminaniana mikasika ny faran'andro izay tsy mety tanteraka foana hatramin'izao (1914,1925,..1975,...2034?).
Ny baiboly milaza fa raha misy maminany ka tsy tantera dia aza matahotra azy akory?
~~~~~ Raha diso ny temoin teo amin'ireo faminaniana ireo moa ve tsy misy diso koa ny fampianaran'ny hafa ~~~~~
Par: FANOMEZAN-DRA SY VONJY AINA
Date: 11 juillet 2016 - 15:15
Ain'olona aman'arivony isan'andro no voavonjy amin'ny alalan'ny famindrana rà era-tany izay afahana manao izany!(tolotra OMS)
Any hopitalin'i Blantyre ohatra (Malawi) , izay afaka nanangana ny fotodrafitr'asa arifomba nafahana nampitombo ny fanomezan-drà (an-tsitrapo sy maimaimmpoana) dia nihena , tao anatiny roa taona fotsiny , efa ho 60%-ny zaza namoy ny ainy , zaza izay voan'ny fahahatsadrà (anémie) ; nihena 50% tahak'izany koa ireo renim-pianakaviana namoy ny ainy rehefa misy fahasarotana eo am-piterahana
Etsy an-kilan'izany kanefa dia mbola misy ihany koa ireo olona monina any amin'ny tany mandroso kanefa nohon'ny foto-pinoana arahiny (vavolombelon'ny Jehovah,...) dia nandà ny famindrana rà ka niaafara tamin'ny famoizany ny ainy
-5 marsa 2010: Trevor Leon Bernhard, dia vavolombelon'i Jehovah , nitaingina mobilety ary nopahon'ny fiara iray ka naratra mafy ;tsy nanaiky ny hamndrana rà izy hamonjena azy dia namoy ny aniny ampitso marainan'iny ihany
-torak'izany koa ity renim-pianakaviana iray tany Belgique namoy ny ainy rehefa avy niteraka satria nandà ny famindrana rà izay nilaina araky ny fanambaran'ny dokotera nohon'ny fahasarotan'ilay fiterahana ;tsy misy valaka amin'izany ny nanjo ilay ramatoa tany Landau-sur-Isar tamin'ny taona 200
Etsy andanin'izany kanefa dia mbola mahatratra 5% ny olona tratran'ny SIDA , avy amin'ny famindrana rà , nohon'ny tsy mbola fisian'ny fanaraha maso akaiky , indrindra any
any amin'ny tany mbola sahirana (Afrika...), ny kalitaon'ny rà
ohatra vitsy fotsiny ireo natolotro ireo ho saintsaintsika mifampitafa eto
Date: 12 juillet 2016 - 14:16
Ho tohizako kely ilay izy!
1) Ny mitsotro alikaola ve mitovy amin'ny mampiditra alikaola amin'ny lalan-drà
=> Eny, satria misy zavatra toin'ny alikaola na siramamy tonga dia azon'ny vatana ampiasana avy hatrany tsy mandalo vavony!!!
2) Ny mampiditra rà amin'ny vatana ve mitovy amin'ny mihinana rà
=> Tsia !!!
=> Ny fampidiran-drà amin'ny vatana dia tsy natao ho toin'ny solon-tsakafo. Fa fanoloina ny zavatra very amin'ny vatana.
Ohatra hoe globule rouge, satria natao hitondra oxygene izy ireny!!
Mitovy amin'ny transplatation d'organe ihany!!
=> Raha misy marary ka tsy afa-mihinan-kanina dia tsy rà no hampidirina aminy fa sakafo ampidirina amin'ny alalan'ny lalan-drà ohatra (alimentation par voie intraveineuse)
Par: fahavalon ny fahamarinana ireo
Date: 13 juillet 2016 - 12:29
JW> Asan’ny Apostoly 15:20. ‘"Fadio ny ra."’
FADIO NY RA izay no didy nomen Andriamanitra, ka rehefa mifady ny ra dia tsy hoe ny ampidirina ao am bava ihany no tafiditra amin izany hoe mifady izany, efa mazava be toy ny masoandro be amin ny mitataovovonana ny fahamarinana nambaran i JW, anefa dia mbola toherin ireo fahavalon ny fahamarinana ihany satria tsy tiany hahalala ny tena marina ny olona ka na dia tohizan i JW 100 pejy aza izany fanazavana mazava be izany dia mahita ny lazainy eo foana ireo fahavalon ny fahamarinana ireo, alain izy ireo ny lakilen ny fahamarinana izy tsy miditra ary izay te hiditra tsy havelany hiditra
OatsyTower> Araka ny fantatra dia tonga hatramin'ny 450 ka hatramin'ny 1150 ny isan'ny temoins maty isan-taona
fa mba fity tapitrisa isan taona kosa no matin ny fandidiana ampiasan dra eo no ho eo sy noho ny aretina azo tamin ny ra nomena azy taty aoriana kely ny fitsaboana nomena azy, sady na atao hoe ho sitrana aza izy ireny dia mbola ho faty ihany, ireo tsy nanaiky nampidiran dra nanaiky ny didin Andriamanitra kosa nefa maty dia tsy maitsy hatsangany amin ny maty indray satria tena nanao ny sitrapony
Date: 13 juillet 2016 - 14:10
"...fa mba fity tapitrisa isan taona kosa no matin ny fandidiana ampiasan dra eo no ho eo..."
Ny fampiasan-drà tokoa ve no mahafaty ireo olona nisedra fandidiana ?
Raha izany tokoa no zava-misy , heveriko fa efa ela no voarara ny fampiana-drà eran'ny hôpitaly misy eto an-tany (tahakan'ny fandrarana ireo fanafody izay hita fa niteraka famoizana aina amin'izay mihinana azy)
Azo atao tsara ny manao fanadihadiana -eny thèse de doctorat mihintsy aza angamba-amina hôpitaly lehibe , na eto an-toerana izany na any ampitan-dranomasina, entina hanaporofona fa mety mahafaty olona aman-tapitrisany isan-taona ny fampiasan-drà
Raha tena misy tokoa izany dia efa tsy ho voa isa ny fitoriana anaton'ny fianakavian'ny maty indrindra any amin'ny tany mandroso ( tadidio fa fitoriana any amin'ny fitsarana no nafahan'ireo fianakaviana sy fikambanana samihafa nahalala ireo fahafatesana ateraky ny fandavana ny famindrana rà hamonjena ny ain'ilay nisedra voina ( loza-mpirakodia , fietrahana nisy fahasarotana , ...)
"...sady na atao hoe ho sitrana aza izy ireny dia mbola ho faty ihany, ireo tsy nanaiky nampidiran dra nanaiky ny didin Andriamanitra kosa nefa maty dia tsy maitsy hatsangany amin ny maty indray satria tena nanao ny sitrapony..."
Resaka safidim-pinoana indray izany tompoko ka na mino ny famonjena sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty aorian'ny fahafatesana ilay olona na tsy mino an'izany dia ny adidin'ny mpitsabo sy ny dokotera ary ny fiaraha-monina dia ny mitsabo sy manasitrana ary manao izay ahalava ny fiainan'olombelona eto ...an-tany.
"fahavalon'ny fahamarinana ireo"
Ilay fahamarinana dia miankina amin'ny finoana na tsy finoana arahan'ny tsirairay ; ny fiheverana fa ny an'ny tena no tena "fahamarinana" fa ny hafa kosa dia "fahavalon ny fahamarinana" dia efa fantatra ny vokany : adi-pinoana izay nadripaka ain'olona aman-tapitrisa hatramin'izay nisiany !
Araky ny hevitro , ny zavatra voalohany tokony hajain'ny olona mbola afaka mampiasa ny sainy dia ny ...fanajana ny fireham-pinoana na tsy finoan'ny tsirairay
Date: 13 juillet 2016 - 14:17
JW , fahavalon ny fahamarinana ireo :
(Genesisy 9:3-4) « Ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo; dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. »
« Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny ràny no aza haninareo. »
(Asan'ny Apostoly 15:20) « fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. »
=> Fa iza moa no tsy manaiky fa tokony ho fadiana ny rà?
=> Na fivavana jiosy na krisitiana dia mahita fa ny mihinana rà dia tsy mitovy amin'ny TRANSFUSION SANGUINE
=> Ny Rà izay voalaza ao anaty baiboly dia rà atao sakafo. Izay no fadiana.
Betsaka ny fanontaniana tsy voavalin'ny temoins mikasika ny fampidiran-drà, an'isan'ny izany ito
Date: 13 juillet 2016 - 14:34
FANOMEZAN-DRA SY VONJY AINA >
> Ianao koa ve temoin tahaka an'i JW?
Ny temoin no tena mihevi-tena fa manana ny fahamarinana voalazanao ary ny fivavahana rehetra dia ao anaty fahadisoana tanteraka.
Raha temoin ianao dia tsy maintsy manaraka izay voalaza ao anatin'ny bokinareo ary tsy mahazo manao tsikera. Raha manao tsikera ianao dia esorina tsy ho temoin intsony. => Mifanohitra amin'ny voalazanao eo ambony izany
Date: 13 juillet 2016 - 15:12
" Ianao koa ve temoin tahaka an'i JW? "
"Raha manao tsikera ianao dia esorina tsy ho temoin intsony. => Mifanohitra amin'ny voalazanao eo ambony izany"
vokany : isika tsirairay no misintona ny fehiny
fanamarihana : ny zava-dehibe angamba tsy dia izay inoako na tsy inoako fa ny fitsakotsakona izay volaza ary indrindra ny fitarihana antsika hikaroka sy handalina
Date: 13 juillet 2016 - 15:25
=> Fa iza no milaza aminao fa ny mampiditra rà dia tsy manao ny sitrapon'i Andriamanitra?
Efa im-betsaka nanao fahadisoana ianareo dia mbola tohizana hatrany.
Anisan'izany ny resaka vaccination, transplatation d'organe, ..., ny faminaniana tsy tanteraka, fampianarana diso miovaova,...
Milaza anefa fa avy amin'Andriamanitra?
Date: 14 juillet 2016 - 11:14
-- Ohabolana 4:18 Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoak'andro maraina, Izay mihamazava mandra-pitataovovonan'ny andro.---
Ho tohizako ihany ny fanazavana ....
« Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby eny amin'izay rehetra itoeranareo: tsy hihinana sabora na rà akory ianareo. »
« Ary aza mihinana rà eny amin'izay rehetra itoeranareo, na ny an'ny vorona, na ny an'ny biby fiompy. »
« Izay rehetra mihinana rà dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny. »
« Ary na iza na iza amin'ny taranak'Isiraely, na amin'ny vahiny eo aminareo, no mihinan-drà, ny Tavako dia hanandrina ny olona izay mihinan-drà, ka hofongorana tsy ho amin'ny fireneny izy. »
« Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny rà; ary nomeko anareo izany hatao ambonin'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny rà no manao fanavotana, satria aina izany. »
« Koa izany no nilazako tamin'ny Zanak'Isiraely hoe: Aza misy mihinan-drà, na ianareo, na ny vahiny eo aminareo. »
« Na iza na iza amin'ny Zanak'Isiraely, na amin'ny vahiny eo aminy, no mihaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana, dia haidiny amin'ny tany ny ràny ka hototofany; »
« fa ny amin'ny amin'ny nofo rehetra, dia ny ràny no ainy; koa izany no nilazako tamin'ny Zanak'Isiraely hoe: Aza mihinana ny ran'ny nofo; fa ny ràny no ain'ny nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia haringana. »
« Aza homana zavatra misy rà; aza manao sikidy na manandro. »
« Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin'ny tany toy ny rano. »
« Kanefa tandremo tsara mba tsy hohaninao ny rà, fa ny rà no aina, ary tsy mahazo mihinana ny aina amin'ny hena ianao. »
(Asan'ny Apostoly 15:20)
« fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiany ny hena fahavetavetana aterina amin'ny sampy sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny rà. »
(Asan'ny Apostoly 15:28-29)
« Fa sitraky ny Fanahy Masina sy izahay tsy hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy izao zavatra tsy maintsy hotandremana izao ihany: »
« dia ny hifadianareo ny hena aterina amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina ary ny fijangajangana; raha mahatandrin-tena hifady izany ianareo, dia ho soa. Veloma ianareo. »
Fihinana ny nofom-biby sy ny ràny no raran'ny baiboly fa tsy azo atao?
Fa mandrara ny fampiasana ràn'olona koa ve ny baiboly?
Mitovy ve ny mihinana rà sy ny mampiasa ràn'olona? -> (Efa voazava any ambony any)
Raisoko ho ohatra ihany ny fivavahana témoin
Inona no atao hoe rà na sang?
sang = plasma (55%) + elements figures (45%)
inona no atao hoe plasma?
plasma = protéines (7%) + eau (91,5%) + autres solutés (1,5%)
inona no atao elements figures?
elements figures = plaquettes + globules blancs + globules rouges
Ny plasma tsy azo ampiasaina?
protéines (7%) + eau (91,5%) + autres solutés (1,5%) nefa afaka ampiasaina?
-> Ny plasma tsy azo ampiasaina fa ny zavatra mahafona ny plasma no azo ampiasaina!!!!
Afaka ampiasana ny protéines (7%) + eau (91,5%) + autres solutés (1,5%) izay mahaforina ny plasma.
** Vaccination :
Mitanisa versets ao anaty baiboly ny societe watchtower izay manome ny fampianaran'ny vavolombelon'i Jehovah fa tsy azo atao ny manao vakisiny.
Nandeha ny fotoana dia nilaza indray ry zareo fa azo atao ny manao vakisiny fa tsy misy teny hanamporofoana an'izany ao anaty baiboly!
** Transplantation d'organe
Araka ny fomba fanaon'ny watchtower dia mitanisa versets ao anaty baiboly hatrany zareo ilazana fa tsy azo atao ny Transplantation d'organe.
Mitovy amin'ny lalàn'ny rà ihany ny Transplantation d'organe. Mitovy amin'ny hoe Transfusion de chair!!!
Nandeha indray ny fotoana dia nekena ny fanaovana Transplantation d'organe satria tsy hita ao anaty baiboly ny lalàna mandrara izany.
** Transfusion sanguine
Ny plasma tsy azo ampiasaina fa ny zavatra mahaforina ny plasma no azo ampiasaina?
Io misy kafe + ronono + siramamy.
Tsy azo atao ny mihinana kafe + ronono + siramamy indray miaraka fa afaka hohanina mitokatokana ny kafe, ny siramamy ny ronono.
-> Mahagaga ilay fampianara izay tsy mifototra amin'ny baiboly. "Hoy ny vazaha hoe jamais 2 sans 3"
-> Ny temoin tsy nivadika dia nahavita tsy nanao vakisiny sy ny Transplantation d'organe na dia nisy fiatraikana ara-pahasalamana aza izany ary
nahatonga fahafatesana tamin'ny olona hafa.
Nahatonga olana ara-pianakaviana ho an'ny hafa kosa nefa izany satria raha fantatra ianao fa nanao vakisiny na transplantation d'organe
dia voarohaka . Esorina ao anaty fikambanan'ny temoin. Ny temoin rehetra izay mahalala anao fa voaroaka ianao dia tsy mahazo miray petsapetsa aminao.
Na ny miarahabanao aza dia tsy azo atao.
-> Ny marina dia izao na HO eken'ny societe watchtower aza fa diso izy amin'ny resaka transfusion sanguine dia tsy hanova ny fampianarany anio dieny ny anio izy
satria efa olona maro no maty nohon'ny resaka tsy fampiasana rà.
Hanenjika ny societe watchtower any amin'ny fitsarana ny manana ny maty ka ho enjana ny vokatra izany eo amin'ny societe watchtower.
Raha tsy misy ny figadrana dia vola amina million de dollar no honotra amin'izany.
Date: 14 juillet 2016 - 18:07
oadray kosa ry << watchtower.lie >> ; mba vakio tsara izay voasoratry ny olona fa manjary lasa fanenjehana sy fankahalana sisa no mibaiko anareo fa tsy tsy fifanakalozan-kevitra intsony
Tsy izaho velively akory no nampiditra an'io fanambarana io fa i << fahavalon ny fahamarinana ireo Date: 13 juillet 2016 - 12:29 >> ary ny tena mampihomehy dia fitsikerana an'io fanambarana io no nataoko fa saingy toa tsy takatrao akory fizotry ny adihevitra
"Efa im-betsaka nanao fahadisoana ianareo dia mbola tohizana hatrany.
Anisan'izany ny resaka vaccination, transplatation d'organe, ..., ny faminaniana tsy tanteraka, fampianarana diso miovaova"
Mbola manamafy itony fanambaranao itony ry << watchtower.lie >> , fa toa tsy hainao akory ny manavaka ny fanambaran'ireo miharo ny foto-kevitra sy foto-pînoana aparitaky ny VAVOLOMBELO'I JEHOVAH sy ny hafa , tahaka ahy , izay manasa ny olona hamakafaka sy handalina ny voalazan'izy ireny ; fitaovana ara-tsaina ilaina izany famakafakana sy fandalinana izany mba afahan'ny olona mitsikera izay lazaina sy dradradradraina ho ...fahamarinana!
Date: 14 juillet 2016 - 19:05
misaotra amin'ny fanamarihana fa tena tsy hitako mihitsy iny!
noheveriko fa iray ihany ianareo
izaho no tsy namaky tsara.
Date: 18 juillet 2016 - 09:28
Ireo versets notanisaiko etsy ambony ireo dia lalàna mahakasika ny rà.
Tsy azo atao ny mihinana rà atao sakafo.
Fa i Jesosy koa dia manasa antsika hisotro ny ràny.
« Fa hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon'ny Zanak'olona sy misotro ny ràny ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. »
« Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay; ary Izaho hanangana azy amin'ny andro farany. »
« Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. »
-> Marina fa fanoharana io fa ny jiosy naheno an'io dia tsy nilaza tamin'i Jesosy HO NANITSAKITSAKA ny lalàn'Andriamanitra.
-> Mbola resy hatrany ny fampianaran'ny temoin hoe tsy azo atao ny mampiditra rà!!!
Date: 18 juillet 2016 - 09:37
Mbola mahakasika ny rà ihany.
Ny societe watchtower izay foibem-pampianaran'ny temoin de Jehovah dia mandainga.
Mba jereo amin'ny internet ny "affaire du sang en Bulgarie et les temoins de Jehovah"
Par: rà-borotsinloza + vary
Date: 19 juillet 2016 - 16:45
dia afangarohy amin'ny laoka rehefa ho masaka ilay vorona : andramo fa tena tsara
tena vendrana be izay nandrara an'izany
Par: aza mifanditra amin tsy mpino
Date: 21 juillet 2016 - 07:26
“Aza omena ny alika izay masina; ary aza atsipy eo anoloan’ny kisoa ny vato soanareo, fandrao (...) [izy] hifotitra ka hamiravira anareo” Matio 7:6.
“Lozanareo mpanora-dalàna sy Fariseo mpihatsaravelatsihy! Fa mitety ranomasina sy mitety tany ianareo mba hampiova finoana olona iray, ary rehefa miova finoana izy, dia ataonareo mendrika ny Gehena avo roa heny noho ianareo.” (Matio 23:15) Mahatonga ny olona iray hanao zavatra tsy mendrika sy tena ratsy, ny fanovana ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny laingan’ny mpanompo sampy.—Romanina 1:24-32.
Date: 22 juillet 2016 - 11:12
Araka ny voalazako hatrany amboalohany dia tsara ny manadihady tsara ny finoana izay hianaranao baiboly
Misy izy ireny no mitondra loza na olana ara-piarahamonina, ara-pianakaviana, manitsakitsaka ny zon'olombelona tsotra izao...
ohatra, rehefa tafiditra ao ianao ka lasa mpikambana ka mandika ny fitsipika napetrany na misy zavatra tsy ifanarahanao amin'ny fampianarana, na te hiala,...
Ny vokatry izay dia tapahina ny fifandraisanao sy ny mpikambana rehetra,
---> Mifanao sakay sy maso ianao sy ny mpikambana rehetra, eny na dia ianao sy ny fianakavianao aza!!!
---> Tsy azo atao na ny miarahaba anao na ny miara misakafo aminao!!!...
---> Na miverina any ampiangonana aza ianao dia tsy misy miarahaba anao any raha tsy afaka enim-bolana (6 mois) any...
Raisoko ho ohatra ny temoin
1 Korintiana 5:9-13 (Baiboly protestanta )
Korintiana 5:9-13 (Baiboly vavolombelon'i Jehovah)
9 Nanoratra taminareo aho mba tsy hifaneraseranareo intsony amin’ny mpijangajanga,
10 nefa tsy te hilaza aho hoe tsy hifanerasera tanteraka amin’ny mpijangajanga eto amin’ity tontolo ity,
na izay manana faniriana tsy mety afa-po na mpanao an-keriny na mpanompo sampy.
Raha izany mantsy, dia tena tsy maintsy miala eo amin’izao tontolo izao ianareo.
11 Fa manoratra aminareo kosa aho izao mba tsy hifaneraseranareo intsony amin’izay antsoina hoe rahalahy nefa mpijangajanga,
na manana faniriana tsy mety afa-po, na mpanompo sampy, na mpanevateva, na mpimamo,
na mpanao an-keriny, ary mba tsy hiara-mihinana aminy akory.
12 Fa inona no idirako amin’izay fitsarana ny any ivelany? Tsy ianareo ve no mitsara ny ato anatiny,
13 fa Andriamanitra kosa no mitsara ny any ivelany? Esory tsy ho eo aminareo ilay mpanao ratsy
2 Tesaloniana 3:14-15 (Baiboly protestanta )
2 Tesaloniana 3:14-15 (Baiboly vavolombelon'i Jehovah)
14 Fa raha misy tsy mankatò ny teninay ato amin’ity taratasy ity, dia mariho izany olona izany,
ka tapaho ny fifaneraserana aminy mba ho menatra izy.
15 Aza dia atao toy ny fahavalo anefa izy na izany aza, fa anaro hatrany toy ny rahalahy.
1) Ny fanaovana aniverssaire, ny fampidiran-drà... koa ve ao anatin'ilay
(1 Korintiana 5:11 )?
2) Sokajiana ho episitily koa ve ny reveillez-vous sy ny tour de garde sy ny boky avaokan'ny société watchtower (2 Tesaloniana 3:14) ?
Raha ohatra izaho ka tsy manaiky ny fampianara mahakasika ny anniverssaire ohatra?
3) Ny gadra aza mbola manana zo ho tsidihina koa nahoana no mampirisika ny olona ao aminy ho tsy tia intsony ny olona miala ao amin'ny societe watchtower?
--> Mifanohitra tanteraka amin'ny fampianaran'i Jesosy mahakasika ny atao hoe fitiavana
Par: ka i jesoa koa ange ka ...
Date: 22 juillet 2016 - 13:10
...niteny hoe :
"Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambon'ny tany Aho ; tsy tonga hitondra fiadanana Aho fa ...SABATRA
Fa tonga Aho hampifandrafy olona amin'ny rainy , ary ny zanakavavy amin'ny reniny ...ary ny ankohonan'ny olona ihany no FAHAVALONY !"
koa angamba endrika fitiavana manokana ho an'ny kristiana koa izany
tia rehefa mitovy kôzy
hifandrafy sy hampiasa sabatra kosa rehefa tsy mitovy firehana
raha jerena ny tantaran'ny kristiana hatramin'izay nisiany dia tsy tambo ho isaina io fifandrafiana sy fampiasana sabatra io !
Date: 22 juillet 2016 - 13:54
ka i jesoa koa ange ka ...
> ie Nilaza izany tokoa izy fa aza adino koa fa misy an'ireto ao anaty baiboly
--> i Jesoa no tena mpampihavana!
--> Apetrao ny sabatra fa izay rehetra mandray sabatra no hovonoina amin'ny sabatra.
(Lioka 2:14) Voninahitra any amin'ny avo Indrindra ho an'Andriamanitra! Ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany*. [*Na: Fankasitrahana ho amin'ny olona]
(Jaona 14:27) Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo.
(Jaona 16:33) Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.
(Asan'ny Apostoly 10:36) Hianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny Zanak'isiraely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy (Izy no Tompon'izao rehetra izao),
Date: 22 juillet 2016 - 14:20
(1 Jaona 3:15)
--> Sokajiana ho mpamono olona izay mankahala ny rahalahiny
(1 Jaona 4:20-21)
Raha misy manao hoe: Tia an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy; fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra Izay tsy hitany?
--> Izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra Izay tsy hitany?
(1 Jaona 4:20-22)
--> Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny
Date: 22 juillet 2016 - 16:56
tiako be ilay fampiadihana toko sy andiny fa saingy ity no mba manitikitika ahy fatratra
-rehefa inona no avoaka ilay sabatra dia rehefa inona no ampidirina amin'ny tranony ilay izy ?
Date: 25 juillet 2016 - 10:40
Misy fifanoherana sy fahadisoana ara-tsiantifika ao anaty baiboly; ka azo ekena ho marina tsy misy diso ve
ny fampianaran'ny finoana sasany izay mifototra amin'ny verset vitsivitsy nefa ao anaty baiboly misy versets aman'aliny!
Ohatra : --- Fifanoherana ---
===> Niresaka nifanatrika tamin'i Jehovah i Mosesy
(Deotoronomia 34:10) « Ary tsy nisy mpaminany intsony niseho teo amin'ny Isiraely tahaka an'i Mosesy, izay fantatr'i Jehovah nifanatrika »
(Eksodosy 33:11) « Ary Jehovah niteny nifanatrika tamin'i Mosesy, tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary niverina nankeo amin'ny toby izy; fa ny mpanompony, dia Josoa zatovo, zanak'i Nona, tsy niala tamin'ny lay. »
(Eksodosy 33:20) « Ary hoy koa Izy: Tsy mahazo mahita ny tavako ianao; fa tsy misy olona mahita Ahy ka ho velona. »
(Eksodosy 33:21) « Dia hoy Jehovah: Indro, misy fitoerana eto anilako; dia hijanona eo ambonin'ny harambato ianao; »
(Eksodosy 33:22) « koa raha mandalo ny voninahitro, dia hataoko eo an-tsefaky ny harambato ianao, ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko. »
(Eksodosy 33:23) « Dia hanaisotra ny tanako Aho, ka hahita ny vohoko ianao; fa ny tavako tsy ho hita. »
===> Azo hohanina daholo ve ny voankazo
(Genesisy 1:29) « Ary Andriamanitra nanao hoe: Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. »
(Genesisy 2:17) « fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. »
Ohatra : --- Fahadisoana ara-tsiantifika ---
(Levitikosy 11:21) « nefa izao kosa no ho fihinanareo amin'ny zava-mandady izay manana elatra sady mandia tongotra efatra, dia izay manam-pingotra ambonin'ny faladiany hitsipihany eo amin'ny tany. »
==> Tsy misy an'izany zava-mandady izay manana elatra sady mandia tongotra efatra izany?
(Levitikosy 11:13) « Ary izao no ho zava-betaveta aminareo amin'ny vorona ka tsy ho fihinanareo, fa zava-betaveta izy: ny voltora sy ny gypa sy ny ankoay »
(Levitikosy 11:19) « sy ny vano sy ny vanobe, isan-karazany, ary ny takidara sy ny manavy. »
==> La chauve-souris est un oiseau
(Salamo 33:13) « Eny an-danitra no itsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra Izy; »
(Salamo 33:14) « Eo amin'ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany, »
(Matio 4:8) « Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny, »
==> Fisaka ny tany
Par: ô re olona e !
Date: 26 juillet 2016 - 19:13
tony ndray le resaka fanodikodinana fanaon'ny mpahay raha (sekta,mpanasa atidoha ...)
fanontaniana tsotra no napetrako :
<< rehefa inona no avoaka ilay sabatra dia rehefa inona no ampidirina amin'ny tranony ilay izy ? >>
misy andiny milaza mazava fa "tsy hitondra fiadanana izy fa sabatra"
ary misy koa ny hoe " Ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao "
ary ahôna koa ity resaka "rahalahinao" sy ny "mpiray firenena aminao " tokony ho tiavina itony ?
"...aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao; mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy.
Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah."
Date: 27 juillet 2016 - 09:47
ô re olona e !
maninona moa raha tonga dia hazavainao ny hevitrao hoe rehefa amin'ny fotoana inona no ampiasaina ny sabatra, dia rahoviana no ampirimina
Date: 27 juillet 2016 - 09:57
Mba te-hamaky eto ny tenako saingy lava loatra ny an'ilay JW. Ekeko fa ny bokin-dry zareo no adikany eto nefa na izany aza lava loatra sady indraindray hors sujet.
Izaho dia tena miombon-kevitra amin'ny rehetra fa tokony handalina Baiboly ny Kristiana ary tokony ho "neutre" ilay fampianarana. Ny Fikambanana Mampiely Baiboly (FFKM + Fiangonana zandriny Protestanta + Advantista) no hitako hoe neutre aloha hatreto. Izany hoe tsy miteny hoe Ny Fiangonanay no marina fa hoe "Jesosy Kristy no Làlana sy Fahamarinana" ary ny "Teninao (izany hoe ny Baiboly) no Fahamarinana.
Date: 27 juillet 2016 - 17:17
oadray ! tsy ianareo roa(lahy) na roa(vavy) na koa roa maianadahy ve ry "OatsyTower" sy ry "ka i jesoa koa ange ka ..." no tokony hanadahatra an'izany ?
za ange ol mba mila fanazavana bebe kokoa e satria toa mifanipaka le izy ?
Date: 27 juillet 2016 - 17:20
de ahôna koa ity resaka fampianarana baiboly neutre ity "ravinsa" ?
mba azonao omena ohatra 1 ve na 2 ny bandy ?
Date: 28 juillet 2016 - 09:43
Neutre ? Averiko kely : tsy miteny hoe Ny Fiangonanay no marina fa hoe "Jesosy Kristy no Làlana sy Fahamarinana" ary ny "Teninao (izany hoe ny Baiboly) no Fahamarinana.
Fampianarana tsy misy lokona antokom-pivavahana ilay lazaiko hoe neutre. Ny fianarana Baiboly dia tokony hitarika ny mpianatra ho an'ilay Nampanoratra ny Baiboly (Ilay Niteny hoe Dinihonareo ny Soratra Masina satria ireny no manambara Ahy) fa tsy hitarika olona handeha hanamaro isa ny mpandrotsaka vola ao anatina antokom-pivavahana iray.
Tsy hanampy teny hafa aho sao lasa mandoko ihany koa dia tsy mety.
Date: 28 juillet 2016 - 11:06
dia misaotra betsaka an-dRavinsa namaly mazava
Date: 31 juillet 2016 - 08:27
1 Mampianatra an’izay lazain’ny Baiboly ny fivavahana marina, fa tsy mampianatra hevitr’olombelona. (Jaona 4:24; 17:17) Anisan’izany ny hoe tsy manana fanahy tsy mety maty ny olona, sy ny hoe ho lasa paradisa ny tany ka ho afaka hiaina mandrakizay ao ny olona. (Salamo 37:29; Isaia 35:5, 6; Salamo 146:4) Tsy matahotra mampiharihary ny fampianaran-diso koa ny fivavahana marina.—Matio 15:9; 23:27, 28.
2 Manampy ny olona hahafantatra an’Andriamanitra ny fivavahana marina. Ampianariny hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra. (Salamo 83:18; Isaia 42:8; Jaona 17:3, 6) Tsy mampianatra ny fivavahana marina hoe tsy takatry ny saina Andriamanitra na hoe tsy miraharaha antsika izy. Ampahafantariny ny olona kosa fa tian’Andriamanitra hifandray aminy isika.—Jakoba 4:8.
3 Ampianarin’ny fivavahana marina fa i Jesosy Kristy no nasain’Andriamanitra namonjy antsika. (Asan’ny Apostoly 4:10, 12) Mankatò ny didin’i Jesosy ny mpivavaka ao ary miezaka manahaka azy.—Jaona 13:15; 15:14.
4 Ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no antenain’ny fivavahana marina hoe hamaha ny olana mahazo ny olombelona. Mazoto mitory momba an’io Fanjakana io ny mpivavaka ao.—Matio 10:7; 24:14.
5 Mampirisika ny olona hifankatia ny fivavahana marina. (Jaona 13:35) Mampianatra koa izy io fa tokony hohajaina sy horaisina tsara ny olona rehetra, na inona na inona firazanany, kolontsainy, fiteniny, ary fiaviany. (Asan’ny Apostoly 10:34, 35) Tia ny olon-drehetra ny mpivavaka ao ka tsy mety mandeha miady.—Mika 4:3; 1 Jaona 3:11, 12.
6 Tsy misy mpitondra fivavahana karamaina ao amin’ny fivavahana marina. Tsy misy olona omena anaram-boninahitra miavaka be koa ao.—Matio 23:8-12; 1 Petera 5:2, 3.
7 Tsy manao politika mihitsy ny fivavahana marina. (Jaona 17:16; 18:36) Manaja sy mankatò ny fanjakana ao amin’ny tany misy azy anefa ny mpivavaka ao. Hoy mantsy ny Baiboly: “Aloavy amin’i Kaisara izay an’i Kaisara [ny mpitondra fanjakana], fa amin’Andriamanitra kosa izay an’Andriamanitra.”—Marka 12:17; Romanina 13:1, 2.
8 Iainana mihitsy ny fivavahana marina, fa tsy fombafomba na fahazarana fotsiny. Mankatò ny toro lalana ao amin’ny Baiboly ny mpivavaka ao, eo amin’ny fiainany manontolo. (Efesianina 5:3-5; 1 Jaona 3:18) Tsy hoe mahatsiaro ho voafehifehy anefa izy ireo amin’izany, fa faly manompo an’ilay “Andriamanitra falifaly.”—1 Timoty 1:11.
9 Vitsy ny olona manaraka ny fivavahana marina. (Matio 7:13, 14) Ambanina sy esoina ary enjehina matetika ireo mpivavaka ao, satria manao ny sitrapon’Andriamanitra.—Matio 5:10-12.
Date: 01 août 2016 - 10:49
Hoy ianao : Ahoana no Ahafantarako ny Fivavahana Marina?
"Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny. Mioty voaloboka na aviavy eny amin’ny tsilo ve ny olona?” (Matio 7:16)
>>>> Ny Vavolombelon' i Jehovah (VJ) dia milaza fa avy amin'Andriamanitra ny fampianarany kanefa dia miovaova foana ilay izy. Ankoatra izay dia manao faminaniana diso foana. Efa impiry izay?
Hoy ny baiboly :
Deotoronomia 18:20: Fa ny mpaminany izay sahy hilaza teny amin'ny anarako, nefa tsy nasaiko nolazainy, na izay miteny amin'ny anaran'andriamani-kafa, dia hatao maty.
--> atao ahoana ny mpaminany diso?
>>>>> Ny voan'ny tokoa ve no amantarana ny hazo?
--> Dia ahoana aza ny affaire pedophilie be dia be ao amin'ny Vavolombelon' i Jehovah.
1 Korintiana 5:12: Fa ahoako ny hitsara ny any ivelany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo?
Tsy avelan'ny Vavolombelon' i Jehovah hilaza any amin'ny fitsarana ny victime fa tazominy ho azy irery ao ny raharahany. Raha milaza izany ny victime dia ho voaroaka ve!!!
Date: 01 août 2016 - 10:53
« Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin'ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin'izao tontolo izao. » (Jakoba 1:27)
Mazotoa ianareo Katolika mikarakara ny hafa amin'ny alalan'ny Care International. Mazotoa ianareo Protestanta manampy ny hafa amin'ny alalan'ny SAF FJKM. Mazotoa ianareo Advantista mikolokolo ny hafa amin'ny alalan'ny ADRA.
Dia avelao ny sasany hanao toriteny lavareny hampitombo ny mpandrotsaka rakitra ao amin'ny trano fivavahany.
Date: 01 août 2016 - 11:03
ravinsa : ianao izany sady katolika no protestanta no advantista?
Hoy i Jesoa ao amin'ny marka 16:17-18
Marka 16 : 17-18 (baiboly katolika)
17 Ary izao no famantarana homba izay mino: Handroaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny tsy mbola hainy izy,
18 handray menarana izy, ary na misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tànana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny.
----> Tenin'i Jesoa io, ka iza no efa nihinana poizina fa tsy maty
Date: 01 août 2016 - 11:23
Hoy ianao Ampianarinay hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra
1) Ilaina amin'ny famonjena ve ny mampiasa ny anaran'Andriamanitra?
~~ Eksodosy 6:3 ~~
--> Koa nahoana no tsy nampafantarina an'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba izany anarana izany?
2) Miverina im-7000 ao amin'ny baiboly origine (hebreo) ny anaran'Andriamanitra fa tsy Jehovah no ao fa YHWH
Tsy misy "J" ny teny hebreo ka tsy ho Jehovah mihitsy no fanononana an'io fa mety ho Yaveh?
--> Raha zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fanononana ny anarany dia maninona no very izany fanonona izany?
Date: 01 août 2016 - 15:28
Mampianatra ny mahakasika an'i Jesosy Kristy tokoa ny Vavombelon'i Jehovah fa saingy mivaona amin'ny fahamarinana
Araka ny fampianaran'ny Vavombelon'i Jehovah dia tsy mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona REHETRA i Jesosy fa mpanalalana amin'Andriamanitra sy olom-bitsy miisa 144000.
Amin'ny alalan'ireo olona 144000 ireo no hahafahan'olona maro hahazo famonjena ary hahafahany hiaina mandrakizay eto an-tany
Mazava anefa ny tenin'Andriamanitra
1 Timoty 2:5: Fa iray no Andriamanitra, ary iray no Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, Izay olona,
1 Timothée 2:5:car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et LES HOMMES est un, [l']homme Christ Jésus,
--> Mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona i Kristy
Date: 01 août 2016 - 20:09
tena fanina be za aminireto fitanisana baiboly vari raraka ireto
tsihay tsihay ntsony ze tena marina
ny JV moa zany no tena fivavahan marina kanefa de fatapoko fatapirenena ny vola be amina $ eo apelatan'ny foibeny ; takizany koa ny vatican ..sty toko tsy forohana ny vola sy harena lalaoviny
ny teleevangelista protestanta any USA multimillardaire dahôlo ; ny pasitera eto dago tsy resahana tsony
Date: 02 août 2016 - 09:16
Hoy ny fanontaniana hoe "ravinsa : ianao izany sady katolika no protestanta no advantista?"
Raha tsy maintsy mamaly io fanontaniana io aho dia Eny no valiny. Kristiana aho ary resy lahatra fa raha ho avy eny amin'ny rahon'ny lanitra i Jesosy Kristy dia tsy hanavaka hoe aleo ny Katolika na ny Prostestanta na ny Advantista na ny anaram-piangonana izao sy izao no hovonjena fa izay mino Azy. Isam-batan'olona ny fivavahana fa tsy faobe.
Raha eo amin'ny fiainana andavanandro dia mpandinika ara-piaraha-monina sy ara-toe-karena ny tenako ka izany no andraisako anjara tsindraindray amin'ny lafiny politika sy toe-karena eto.
Date: 02 août 2016 - 09:30
ô re olona e ! :
Tiako ho valiana tsirairay ny fanehoan-kevitr'i JW. Te hilaza izy fa ny fivavahany ihany no marina. Izany no antony ireo fitanisana baiboly ireo.
Date: 02 août 2016 - 09:40
Ny tiako ambara dia hoe : tena misy ve zany fivavahana neutre izany?
ohatra : nisy gazety navoakan'ny fjkm ( mpampianatra sekoly alahady ), mitondra ny lohateny hoe :
Mivavaka amin'iza ny franç-maçon ?
Voalaza ao fa ny franç maçon dia fikambanana mivohy ny firalahiana, mitazona tsiambara-telo, mahasahy ho faty raha mamoaka tsiambara-telo.
Voatonina ao amin'ilay gazety fa ny mormon sy ONG sasany eto madagasikara dia misy ifandraisany amin'ny franç-maçon
--> Ny dikan'izany dia ampitandremina ihany izany ny mpino amin'ny fivavahana hafa, izany hoe ilay neutre tianao lazaina izany misy fetrany ihany? sa ?
Date: 03 août 2016 - 09:20
mandinika! : ilay fivavahana neutre resahiko dia eo anivon'ny Fivavahana Kristiana.
"ary tany Antiokia no voalohany nanaovana ny anaran'ny mpianatra hoe Kristiana". Asan'ny Apostoly 11:26b
Ao anatin'ny samy Kristiana izany dia tsy tokony hisy intsony ny fitarihana olona hiala ao am-piangonany hanatevin-daharana ny fiangonana hafa fa fitaomana ny olona hanatona bebe kokoa an'i Kristy, Tompo sy Andriamanitra, Andriamanitra Zanaka, sisa no tokony hatao.
Date: 03 août 2016 - 18:23
Hita tokoa fa tena misy mahalala andinin-teny ao anaty baiboly isika mpisera ato.
Tena be hafanam-po be koa ny sasany eo amin'ny fanehoan-kevitra.
Nefa hitako hoe misy mihinana ambolony ihany amin'ny ankapobeny.
Ohatra ilay resaka hoe hoe "mifady rà" (asa 15:19) izay oharina @ sakafo ary ny hifandraisan'izany @ fampidirana rà.
Raha ilay teny hoe "mifady" fotsiny no resahina dia tokony tsy hisy resabe intsony satria mazavabe io.
Toy izany koa ny resaka hafa izay tsy tiako resahina satria samihafa ilay fahatakaran-javatra ka lasa fifampiresahan'ny samy marenina avy eo.
Date: 03 août 2016 - 18:25
asa 15: 29 no tiako ambara fa aza tsiny re tompoko
Date: 05 août 2016 - 22:45
tena marina ara-bakiteny sy azo appliquer-na à la lettre ve izay voalaza ao anatin'io baiboly io ?
na resaka sakafo tokony ho fadina izany na didy aman-dalàna sy torohevitra hafa zavatra hafa
mbola valable fôna ve amin'izao 2016 izao ?
Date: 08 août 2016 - 15:49
Matoa ry "tena marina ara-bakiteny ?" maro no mahita soa ary indrindra fahasambarana @ fanarahana ny toromarika sy fitsipika ao anaty Baiboly dia mazava ho azy fa mbola valable amin'izao 2016 izao sy ny @ ho avy ihany koa ary izay indrindra no tena anisan'ny mampihavaka ny Baiboly @ boky hafa.
Ny @ hoe fampiharana ara-bakiteny indray dia tsy voatery satria mila jerena ihany koa ny contexte, ny vanim-potoana, ny antony sns mahakasika ny fiorenan'ilay fanambarana.
Izany rehetra izany no midika hoe tsy vakiana ohatra ny famakiana boky roman ny famakiana ny Baiboly.
Rehefa tonga amin'ny fahitana izay voalaza ao @ fomba ara-panahy (manana vsion spirituelle des choses) ny olona iray vao tena hahatakatra izay voambara ao.
Mba ahatongavana @ izany anefa dia mila manana toe-tsaina amam--panahy mifanaraka @ izay takin'Andriamanitra aminy ny olona iray mba ahafahan'ny Fanahy masina miasa sy mamolavola azy @izany.
Izay no mahatonga ny maro na mahay andinin-teny voalaza ao ary dia tsy mahatakatra ilay fahalalàna voaraikitra ao satria tsy ao aminy ireo voalazako teo aloha teo.
Date: 09 août 2016 - 10:45
> tena marina ara-bakiteny ?
ampiko hoe :
tena marina ara-bakiteny ve?
tena avy amin'Andriamanitra marina ve?
tsy misy diso ve?
tsy mifanohitra amin'izy samy izy ve ny teny ao anaty baiboly?
marina ara-tsiansa ve?
tenin'olombelona ve sa tenin'Andriamanitra?
Mba vakio ary ireto azafady :
Matio 26:33:Fa Petera namaly ka nanao taminy hoe: Na dia ho tafintohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina mandrakizay.
Matio 26:34:Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo ianao.
--> Raha tsy mbola misy akoho maneno, dia handà Ahy intelo ianao.
Lioka 22:60:Fa hoy Petera: Ralehilahy, tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia nisy akoho naneno.
Lioka 22:61:Ary ny Tompo nitodika, dia nijery an'i Petera. Ary Petera nahatsiaro ilay tenin'ny Tompo nolazainy taminy hoe: Raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia handà Ahy intelo ianao.
--> Raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia handà Ahy intelo ianao.
Marka 14:30:Ary hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio, dia amin'ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany, dia handà Ahy intelo ianao.
--> Raha tsy mbola misy akoho maneno fanindroany, dia handà Ahy intelo ianao (fanindroany???)
Jaona 13:38:Jesosy namaly hoe: Ny ainao va no hafoinao noho ny amiko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Tsy mbola hisy akoho haneno mandra-pandànao Ahy intelo.
--> Tsy mbola hisy akoho haneno mandra-pandànao Ahy intelo.
iza amin'ireo verset ireo no marina nefa anie ka nanatrika teo daholo ny mpianatra e? sa ?
Date: 09 août 2016 - 16:10
Io zavatra nampoitran'i mandinika! io no antsoina hoe "contradiction apparente". Azo hazavaina tsara ny mahakasika ireo ary aleo izay liana @ fianarana ny Baiboly no hanontany izany any @ ze misy azy any dia hahita ny valiny mahafa pò raha sendra ireo karazana olona mandinika ny Baiboly araka ny voalazako t@ post teo aloha.
Date: 10 août 2016 - 09:36
Hoy Jesosy Kristy : « Tamin'izany andro izany dia namaly Jesosy ka nanao hoe: Midera Anao Aho, Raiko, Tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. » (Matio 11:25)
Midika zavatra betsaka io Tenin'ny Tompo io. Tena midika zavatra betsaka.
Date: 10 août 2016 - 14:53